Sharciga Thai: Saliida Cannabis ee saafiga ah kama sii darnaado daroogada • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Sharciga Thai: Saliidaha xashiishadda saafiga ahi mar dambe maandooriye ahaan
CBDcannabisWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
Sharciga Thai: Saliidaha xashiishadda saafiga ahi mar dambe maandooriye ahaan
albaabka Ties Inc. 27 September 2019
maqaal by Ties Inc. 27 September 2019
Dadaal lagu doonayo in lagu fududeeyo sharciga ku xeeran xashiishadda caafimaad ee Thailand, cannabidiol (CBD) ee laga soo saaro xashiishadda ayaan hadda wasaaradda caafimaadku u aqoonsan maandooriye. Tani waxay khusaysaa marka alaabtu leedahay nadiif ah ugu yaraan 99% oo ay ka kooban tahay wax ka yar 0,01% THC.
Dalku wuxuu sidoo kale si xor ah u siinayaa 99% saliida CBD saafi ah oo laga sameeyay hemp. Maansada dhexdeena ah. Waxay macnaheedu tahay in saliidda CBD ee ka kooban THC aad u yar ee Thailand aysan ahayn maandooriyeyaal oo hoos taga Sharciga Maandooriyaha ee 1979.
2 Maalgelin shisheeye ee wax soo saarka cannabis maxalliga ah
4 Bukaanku ma u baahan yihiin ruqsad haysasho si loogu daaweeyo CBD?
5 Socdaallada caalamiga ah miyaa looga baahan yahay inay haystaan ​​rukhsad haysashada?
Hase yeeshe, dadku waa inaysan u oggolaan naftooda in ay si aad ah u hoggaamiyaan xamaasadda qaybtan xoreynta wax soo saarka CBD, iibinta, dhoofinta, iyo lahaanshaha. Xashiishadda iyo soosaarida xashiishku waxay ku sii jiraan koontarool adag maamulku. Marka laga eego dhinaca sharciga, xoreynta waxaa loo fasiri karaa oo kaliya talaabada ugu horeysa ee xoreynta dhabta ah ee xashiishadda daawada. Inta la sugayo xeerar si cad loo qeexay.
Si kastaba ha noqotee, qaanuunka cusub wuxuu siiyaa rajo rajo si shirkadaha gaarka loo leeyahay ay u maalgashadaan wax soo saarka 99% saafi CBD laga helo xashiishadda iyo hemp. Iyada oo lagu raaxeysanayo sharciyada, yaraanta daroogada cannabis si dhakhso ah ayaa loo xallin doonaa.
Maalgelin shisheeye ee wax soo saarka cannabis maxalliga ah
99% saliida saafiga ah ee CBD ee laga soo saaro xashiishka looma tixgelin doono suuxin. Waxaa la soo saaray waxaa lagu soo saaray Thailand. Soo dejinta weli suurtagal maaha muddo shan sano ah. Muddadan, dhoofinta ayaa si adag loo mamnuucay badeecada waxaa loo kala saaraa daroogo sharci darro ah.
Sharciga cusub wuxuu kobcin doonaa soosaarka saliida Thai CBD ee daawooyinka. Isla mar ahaantaana, waxay u oggolaaneysaa ajaanibta inay maalgashadaan shirkadaha wax soo saarka Thai. Sidaas guul-guul. Waxaa intaa dheer, waxay macnaheedu noqon kartaa in wax soosaarka warshadaha ballaaran uu u baahan yahay tiknoolajiyad casri ah oo dibedda ah. Ruqsad soo saarista xashiishadda ayaa wali loo baahan yahay, maaddaama xarriiq la dhex dhigay ka shaqeynta daroogada xashiishadda iyo soo saarista waxyaabaha ka soo baxa CBD ee xorta ah. Liisanka wax soo saarka ayaa looga baahan yahay in lagu farsameeyo xashiishka maandooriyaha ah ee warshad isla markaana si kiimiko ah loogu beddelo saliida CBD saafiga ah ee 99%, iyada oo THC aan ka badnayn 0,01% miisaan ahaan.
Jaamacadaha qaarkood iyo ururada dowlada waxay leeyihiin ruqsad. Ururka dawooyinka ee dawladu waa hogaamiyaha kooxdan, oo leh awood sare oo ay ugu rogi karaan wax soo saarkooda cilmi-baaris shirkad ganacsi oo weyn. Waxay xiiseynayaan saliida CBD-da ee saafiga ah laakiin wax qorshe ah uma hayaan inay soo saaraan. Iyada oo la raacayo qawaaniin dheeri ah, codsadayaal badan oo ka socda shirkadaha gaarka loo leeyahay waa la soo dhaweynayaa.
Bukaanku ma u baahan yihiin ruqsad haysasho si loogu daaweeyo CBD?
Aynu u maleyno inaad haysatid liisanka wax soo saarka xashiishadda si aad u sameysid saliidda CBD ee saafiga ah. Su'aal ayaa soo baxaysa haddii aad sidoo kale u baahan tahay liisamo kala duwan oo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ah si aad u iibiso, u soo dhoofiso ama u dhoofiso saliiddan CBD? Suurtagalnimada oo dhan, haa. Oo ka warran bukaanka? Ma u baahan yihiin ruqsadda haysashada?
Malaha maya. Ugu yaraan, taasi waa waxa sharciga hadda jira ee xashiishadda cannabis leeyahay. Bixinta dawada waxaa qortay dhakhtar si gaar ah loogu tababaray xashiishadda oo ay soo saartay Waaxda Adeegyada Caafimaadka. Waqtiga xaadirka ah, kuwani waa ku dhowaad dhakhaatiir 1.200.
Socdaallada caalamiga ah miyaa looga baahan yahay inay haystaan ​​rukhsad haysashada?
Bukaannada caalamiga ah ee laga helo dawooyinka xashiishadda ee ka yimaada dibedda waxay u baahan yihiin oggolaansho lahaansho oo ka timaadda FDA si ay u keenaan daawooyinka xashiishadda Thailand si ay u isticmaalaan. Intaas waxaa sii dheer, farqi weyn ayaa u dhexeeya saliida CBD ee laga sameeyay xashiishka ama CBD laga soo qaado hemp. In kasta oo ay jirto mamnuuc 5 sano oo laga soo dejinayo saliida xashiishadda, tani ma khuseyso soosaarida CBD saafi ah ee laga soo saaray hemp Haddana weli waxaa jira hubanti la’aan badan oo arrintan ku saabsan. Ilaa sharciyada iyo qawaaniintu ay ka cad yihiin meel kasta, waxaa lagula talinayaa inaad sugto in muddo ah soo dejinta ballaaran ee CBD ee Thailand.
Akhri wax dheeraad ah khaosodenglish.com (Source, EN)
CBDsaliid cbdxagashasharci ahaansharci-dejintadaawada cawskaThailand
Canberra ayaa noqotay magaaladii ugu horreysay ee Australia ee sharci ka dhigta marijuana
Go'doonsan CBD vs CBD spectrum buuxa. Waa maxay...
Xanjada Gorilla: xaddiga cannabis ee xilligan
Imtixaanka ugu horreeya adduunka: ma loo isticmaali karaa...